Landa i-Northrop XP-56 Black Bullet FSX - Rikoooo
Usayizi 12.35 MB
Play 6 223
I model 3D lifana ncamashi high kanye abanikeze asebenza nabo virtual nge icindezeleka inkambiso Izikali HD yokwenza ngaphakathi nangaphandle. Afakwe imisindo omunye repaint of USAAF 1944 - Prototype Fighter.
I Northrop XP-56 Black Bullet kuyinto American fighter umshayeli. iye yabhekana nezinkinga eziningi phakathi ukuthuthukiswa zalo futhi ngenxa yalokho ngeke wangena inkonzo ne USAF. kuba manje obala eNational Air and Space Museum e Washington DC.
I-Fokker D.21 Package v2.0 FSX & P3D 2